Oppo Watch dia ofisialy: Miaraka amin'ny Color OS sy amin'ny habe roa | Androidsis
Oppo dia nanambara ny smartwatch nandao azy io mahalala antsipiriany nandritra ny herinandro lasa, anisan'izany ny famelabelarany tamin'ny 6 martsa. ny Ny Oppo Watch dia misarika ny saina betsaka amin'ny famolavolana sahy, ampiany fiasa tsara sasany izay ahazoana tombony betsaka amin'ireo fitaovana matanjaka.
Ny Oppo Watch dia ho tonga amina habe roa voalohanyNoho izany, hanana safidy iray isika na iray hafa miankina amin'ny filàna. Ny mpanamboatra sinoa dia nikarakara ny sehatry ny antsipiriany ampy, izany dia ampiana rindrambaiko iray an'ny trano miorina amin'ny rafitra Android.
Endri-javatra Oppo Watch
Ny famantaranandro Oppo dia manana tontonana AMOLED miolakolaka miaraka amin'ny 326 ppi, manampy 100% ny gamut miloko DCI-P3. Tonga amin'ny habe 1,6 sy 1,9-inch izy ity, namboarina tamin'ny aliminioma ary nanampy bokotra roa teo amin'ny sisiny hamakivakiana ny menus an'ilay fitaovana, zavatra manan-danja raha te hiditra haingana amin'izy ireo isika.
Fijerena Oppo Izy io dia manampy fanatanjahan-tena isan-karazany, ora torimaso ary tahan'ny fo, nefa koa manana electrocardiogram (ECG). Ny famantaranandro dia manana isa 5ATM ho an'ny fanoherana ny rano, izay tena ilaina raha sendra mahazo rano eo amboniny izy.
Ny processeur dia ny Snapdragon Wear 2500, fa izy io dia hotohanan'ny Apollo 3, coprocessor ahafahany manao asa hafa any aoriana. Ny fitehirizana anatiny dia 8GB, rindrambaiko napetraka dia Color OS miorina amin'ny Android. Izy io dia miaraka amin'ny GPS natsangana, ny fifandraisana NFC ary ny Bluetooth 4.2, azo ampifandraisina amin'ny telefaona misy Android 6.0 na kinova ambonimbony kokoa.
Ny Watch Oppo dia hanana Watch VOOC, fiampangana haingana ny baterinao, famoahana 50% ny baterinao ao anatin'ny 17 minitra fotsiny. Apollo 3 dia ho lasa CPU ampiasaina rehefa mandeha amin'ny maody fitsitsiana herinaratra. Ny orinasa dia mampanantena 40 ora miasa amin'ny fampiasana mahazatra, raha amin'ny fitsitsiana angovo kosa dia handeha amin'ny fizakantenany 21 andro
Tonga ny 24 Martsa any China ny Oppo Watch, ataovy amin'ny pre-order manomboka anio. Ny vidin'ny maodely 1,6 santimetatra dia CNY 1.499 (190 euro hanovana) ary CNY 1.999 (254 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Oppo Watch dia ofisialy: Tonga miaraka amin'ny Color OS sy amin'ny habe roa izy
Ny Oppo Find X2 Pro dia voatanisa ho toy ny finday miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra amin'ny laharana DxOMark [Fijerenan'ny fakan-tsary]
Oppo Find X2 ary Find X2 Pro, tsangan-kazo roa misy tsipika misy efijery 120 Hz sy Snapdragon 865